ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): မတူညီသောကွာခြားမှုများ
သံရုံးကိုသွားတော့ ကျမက စာရွက်လေးတစ်ရွက်ပဲလာပြန်ပေးတာပါ။ ဘာမှ သူတို့နဲ့ ပြောဖို့ အကြောင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီစာရွက်လေးကို သူတို့ကိုပေးပြီး လက်မှတ်လေးထိုးပြီး ပြန်လာဖို့အရေးကို ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘဲ ၂နာရီခွဲကျော်ကျော် စောင့်လိုက်ရပါတယ်။ ကျမက ` စာရွက်လာပေးတာပါရှင်´လို့ သွားပြောတော့ ခဏစောင့်အုန်းချည်း ပြောနေပါတယ်။ တကယ်ဆို မကြာသင့်ဘဲကြာနေတာပါ။ မြန်မာပြည်အတိုင်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ကျမလည်း စိတ်တိုတိုနဲ့ထိုင်စောင့်နေရပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် အားလုံးက အချိန်နဲ့သွားလာနေရတာပါ။ လူတွေကို အဆင်ပြေသက်သာအောင် သူများအစိုးရတွေက ဆောင်ရွက်ပေးနေချိန်မှာ နအဖနဲ့ ဆက်နွယ်သောရုံးတွေအားလုံးကတော့ လူတွေကို အမျိုးမျိုးစိတ်ရော လူရော ဒုက္ခပေးထားကြပါတယ်။ ဥပမာ - ပြန်အပ်ရသော စာရွက်စာတန်းတွေဆို SG ICA ရုံးတွေလို သက်ဆိုင်ရာ BOX တွေနဲ့ ထားရှိလိုက်ရင် လူတွေ ဘယ်လောက် အချိန်ကုန်သက်သာမလည်း။ အခုဆို သံရုံးလာရင် ဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုင်စောင့် အနည်းဆုံး ၂နာရီ။ ပြီးရင် သူတို့နဲ့ပြောပြီးရင် လိုချင်တဲ့ စာရွက်တို့ စာအုပ်တို့ရှီရင် ထပ်စောင့် ၂နာရီ။ ပြီးရင် လာခဲ့ ပါတာအကုန်ထုတ် အကုန်ဆက်သပေတော့။ အားလုံးလည်း ရင်ထဲမှာအမုန်း မျက်နှာမှာတော့အပြုံးလေးဆင်ထားရတာပေါ့။ ကောင်တာမှာလည်း တစ်ယောက်မှမထိုင်နေတော့ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာပြည်သွားလည်ဖို့ဗီဇာလာယူတဲ့ အဖြူကောင် ၁ကောင်လည်း ယောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ကောင်တာမှာ လူရှိနေသင့်တယ်လေ။ အခုတော့ ဟင်းလင်းပြင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ လူတွေကို သက်သက်နဲ့ ဒုက္ခပေးထားတာ။ နောက်တော့ ထိုင်စရာက ကျမဘေးက တခုံပဲရှိတာနဲ့ အဲဒီအဖြူကောင်လည်း ကျမနားလာထိုင်ပါတယ်။ နောက် ဘယ်သူမှမရှိဘူးလား ကျမကိုမေးပါတယ်။ ကျမလည်း ထမင်းစားချိန်လို့ ကြည့်ကောင်းအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အချိန်က ၄နာရီလောက်ရှိနေပြီ။ လိမ်တာကလည်း သိသာတယ်နော်ဟိး။ သူက မြန်မာပြည်သွားလည်ဖို့ပြောပြတော့ ကျမလည်း နားထောင်နေလိုက်ပါတယ်။ နောက် မြန်မာငွေနဲ့ပတ်သတ် သိသင့်သလောက် ရှင်းပြပေးလိုက်တယ်။ သူလည်း မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သတ်ရင် ငဒူထင်ပါတယ်။ တော်တော်အံ့သြသွားတယ်။ သူ့ဘေးက အန်တီကြီးတစ်ယောက်ကပါ ကျမစကားကို ၀င်ထောက်ခံပြောပေးမှ သူက ယုံတော့တယ်။ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်းသလိုပါပဲလေ။
U r very luck coz u get bak ur wallet. As for me, during 1 n half years in sg, my frd and I have never found our wallets.I dont know whether the police are busy or not coz of our report but my ph bill for that month is the highest. On top of them, my bike was stolen in mrt stand even it was locked.
By the way, I would like to inform you all that in Myanmar, applying for National Registration Card (NRC) takes over5years and I haven't got my NRC. The red tape system used in Myanmar is so terrible.